Rasaasa News – Jijiga: Qaar ka mid ah Shaqaalaha ESTV, oo la Xidhay
on March 3, 2014 12:40 pm
Jijiga, Mar 3, 2014 – War naga soo gaadhay magaalada Jijiga, ayaa sheegay in xalay la xidhay dhawr qof oo ka tirsan shaqaalaha ESTV. Warkan oo lagu soo gaadhsiiyey bogga rasaasa.com, e-mail ayaa cadeeyey xadhiga qaar ka mid ah shaqaalaha ESTV.
Xadhiga shaqaalaha ESTV, ayaa loo aanaynayaa in ay la xidhiidho xaflad lagu qabtay magaalada Jijiga todobaadkii hore, taas oo ay fadhiyeen dhamaan shaqaalah iyo madaxda Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI].
Xalflada waxaa ka mid ahaa su,aalo la waydiinayey qaar ka mida shaqaalaha iyo masuuliyiinta dawlada, oo labo labo la isu raaciyey. Labada ruux mid ka mid ah, waxaa shaashada laga tusayey sawir, dabadeedna wuxuu u sharxayey lamaanahiisa, si uu u sheego waxa sawirku yahay.
Si lama filaan ah, waxaa shaashada uga soo booday sawirka Madaxwayne Cabdi, hal mar ayey shaqaalhii xidhiidhka qosol iyo naxdin islataageen. In kasta oo uu isku dayey injineer Faysal in uu sharxo sawirka la tusay, hadana markiiba waxaa lagu badalay sawirka maabka Ismaamulka.
Shaqaalaha la xidhay ayaan na loo soo sheegin tiradooda iyo magacyadooda, laakiin waxaa la sheegay oo kaliya magaca hore ee farsamoyaan Maxamed oo ka mid ah dadka la xidhay.
Warbaahinta Ismaamulka, ayaa si toos ah u hoos taga masuuliyiinta sare, xidhiidh dhawna la leh. Barnaamijyada uu sii daayo ESTV, ayaa ah kuwa kooban oo aan dhaafsanayn Jijiga.
Ma cada sababta dhabta ah ee loo xidhay shaqaalaha, laakiin qofka e-mailka noo soo diray, wuxuu sheegay in dadka magaaladu ay hadal hayaan in xadhigu daba socdo dhacdaddii ESTV, ee xafladii qiimaynta lixda bilood ee ismaamulka Somalida Itobiya [ISI].
Wixii war ah ee ka soo kordha waan idinla socod siin doonaa.